Ciidamada xasillinta oo howlgalo aan caadi ahayn ka wada magaalada Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Ciidamada xasillinta oo howlgalo aan caadi ahayn ka wada magaalada Muqdisho
Ciidamada xasillinta ammaanka magaalada Muqdisho ayaa si aan caadi ahayn u kordhiyay howlgalada ay maalmihii ugu dambeysay ka wadeen xaafadaha ku yaalla degmooyinka gobolka Banaadir, iyadoona ciidamado aad u badan maanta lagu daadiyay wadooyinka iyo isgoysyadda Muqdisho.
Ciidamadaasi ayaa maanta lagu arkayaa waddooyinka iyagoo baaritaano adag ku sameeynaya gaadiidka yar-yar iyo kuwa dadweynaha ah, waxayna ciidamadaasi dadka shacabka ah ku amrayaan in gaadiidka ay saaran yihiin kasoo degaan, si baaritaano loogu sameeyo.
Goobaha ay ciidamadaasi baaritaanada ka wadaan ayaa ku kala yaalla degmooyinka Waaberi, Hodon, Wardhiigley iyo Wadajir ee magaalada Muqdisho, iyadoona baaritaankaasi uu saameyn aad u ballaaran ku yeeshay isku socodka gaadiidka, dadka iyo ganacsigaba.
Dhinaca kale, wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Isloow (Ducaale) oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in howlgalkaan uu qeyb ka yahay sugidda amniga degmooyinka gobolka Banaadir, wuxuuna howl-galkaan kusoo beegmayaa xilli ay soo dhaw-dahay xuska munaasabadda 1-da Luulyo.
1-da Luulyo ayaa ah maalintii gobolada Koonfureed ee dalka Soomaaliya ay xuriyadooda ka qaateen gumeystaha Talyaaniga, waxaana qeybo badan oo ka mid ah dalka laga xusaa munaasabadda 1-da Luulyo.
Tan iyo markii ay ciidamada xasillinta ammaanka Muqdisho howlgalada ka bilaabeen degmooyinka gobolka Banaadir, waxay dagaalyahanadda Al-shabaab badaleen qaabka ay weerarada u geysan jireen, iyagoona seddax weerar oo kala duwan ka fulliyay xilliga lagu guddo jiray bisha barakeysan ee Ramadaan, kuwaas oo qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kasoo gaartay dad shacab ah.